Steemhunt Airdrop and Bounty program translated in burmese language – @mmunited
steemhunt steemit steempress
Steemhunt Airdrop and Bounty program translated in burmese language
A total of 500M HUNT tokens will be issued, and 250M tokens (50%) will be airdropped to Steemians – largest-ever airdrop for Steemit users. SMT-based HUNT tokens are to be distributed ina1:1 ratio to the ERC20 tokens held by Steemhunt off-chain wallet owners and registered Ether addresses
ကျွန်တော်တို့ဆီမှာ Ether address တစ်ခုရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလင့်ခ်ကို နှိပ်ပြီး Login လုပ်လိုက်ပါ။ မိမိရဲ့ profile ပုံကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ ပြီးတာနဲ့ walletbeta ကိုနှိပ်ပါ။
ပုံမှာ ပြထားသလို SP claim ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။
နောက်တစ်ဆင့်မှာကတော့ Claim HUNT Tokens ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ ကိုယ့်မှာ ရှိတဲ့ SP အတိုင်း HUNT Token ကို ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီအဆင့်မှာကတော့ OK ကိုနှိပ်ပေးပါ။
ဒါဆိုရင် HUNT token တွေကို ရယူပြီးဖြစ်သွားပါပြီ။ ဒီ Token တွေကို project တစ်ခုကို ထောက်ပံ့ပေးတဲ့နေရာမှာသုံးလို့ရပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ်ရင်လဲ Ether နဲ့ လဲလို့ရပါတယ်။ ERC20 token တွေဖြစ်နေလို့ပါ။ ဒိထက်များတဲ့ Token တွေကို ရယူနိုင်မည့် အခွင့်အရေးတွေ ရှိနေပါသေးတယ်။ အောက်မှာဆက်လက်ရေးသားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
HUNT Tokens Airdrop Manual
1. ERC20 to SMT Tokens
ပထမဆုံး ERC20 ကို အခြေပြုတဲ့ HUNT token တွေကို အရင်ပြုလုပ်ပြီး Steemian တွေကို ခွဲဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ Steemhunt မှာ Steemit နဲ့မပတ်သက်တဲ့ wallet တစ်ခုဖန်တီးမှာဖြစ်ပြီး အဲ့ ဒိ wallet ကနေ airdrop token တွေကို လက်ခံနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ ဒိ token တွေကို သင့်ရဲ့ ether wallet ဆီကို လွှဲပြောင်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ HUNT token တွေကို SP ပိုင်ဆိုင်မှုအရ 1:1 နဲ့ခွဲဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
2. Total Airdrop Distributions – 250M out of 500M HUNT Tokens (50%)
SP holders တွေကို 100M ပေးမှာဖြစ်ပြီး 150M ကိုတော့ Steemhunt မှာ Posting, Referral, Voting/Resteem and Sponsor စတာတွေအတွက် အချိုးကျခွဲဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒိတော့ ထပ်ရဖို့က အတော်များများကျန်ပါသေးတယ်။
2-1. 100M tokens for SP holders
Steemit user တွေအနေနဲ့ ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ SP အတိုင်း HUNT token ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
သင်ရမည့် HUNT token ပမာဏက သူများဆီက ရထားတဲ့ပမာဏ မဟုတ်ရပါဘူး။
HUNT token ကို Steemhunt.com မှာရှိတဲ့ wallet ကနေပဲ claim လုပ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ပထမဆုံး ယူတဲ့သူက ပထမဆုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ စိတ်မပူပါနဲ့ 100M token ဆိုတဲ့ ပမာဏဟာ ရှိသမျှ SP အကုန်လုံးနီးပါးအတွက်လုံလောက်ပါတယ်။
တစ်ကယ်လို့ SMT စတင်တဲ့အထိကို token တွေအကုန်လုံးကို claim မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် ကျန်နေတဲ့ token တွေကို ဖျက်ဆီးပစ်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီairdrop ကို August 13 မှာ စတင်မှာဖြစ်ပြီး Sep 13 မှာပြီးဆုံးမှာဖြစ်ပါတယ်။
2-2. 150M tokens for bounty rewards for Steemhunt contributors
Steemhunt platform ကို လူသိများလာစေဖို့ ဆုပေးတဲ့ စနစ်တစ်ခုကို ပြုလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီအစီအစဉ်ကို အများဆုံး ရက် ၅၀၀ ကြာတဲ့အထိပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ SMT ကို ရက် ၅၀၀ အတွင်း စတင်နိုင်မယ်လို့ ယုံကြည်တဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ကယ်လို့ SMT ကို ရက် ၅၀၀ ထက်စောပြီး စတင်နိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ မပေးရသေးပဲ ကျန်နေသေးတဲ့ token တွေကို ဖျက်ဆီးပစ်မှာဖြစ်ပါတယ်။
တစ်နေ့ကို token 300000 ခွဲဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
​ဒီ bounty အစီစဉ်မှာ အပိုင်းလေးပိုင်းပါမှာဖြစ်ပါတယ်။
Posting/Commenting/Moderation on Steemhunt (20%)
စသည်တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီairdrop တွေအကုန်လုံးကို wallet interface အသင့်ဖြစ်တာနဲ့ စတင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
2-2-1. Delegation Sponsors
Steemhunt ကို SP ပေးထားတဲ့သူတွေအတွက် တစ်ရက်ကို ၉၀၀၀၀ token ခွဲဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဘယ်လောက်ရမလဲဆိုတာကတော့ သူပေးထားတဲ့ SP ပမာဏနဲ့ စုစုပေါင်း SP ကို အချိုးချပြီးပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
Delegator’s token တွေကိုတော့ တနင်္လာနေ့တိုင်းခွဲဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
စပွန်ဆာတွေအတွက် tokenခွဲဝေမှုကို 21-May ထဲက စလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
Wallet အသင့်ဖြစ်တဲ့အခါမှာ wallet ထဲကို ထည့်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
Steemhunt.com မှာရှိတဲ့ Today tab က ပိုစ့်တွေကို upvote/resteem လုပ်တဲ့သူတွေကို တစ့်နေ့ကို token 60000 ခွဲပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
၄၀၀၀၀ ကတော့ မဲပေးတဲ့သူတွေအတွက်ဖြစ်ပြီး ၂၀၀၀၀ ကတော့ resteem လုပ်တဲ့သူတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။
upvote ပေးတဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ ကိုယ့်ရဲ့ vote value နဲ့ စုစုပေါင်း vote value ပေါ်မူတည်ပြီး ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
Resteem လုပ်တဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ 1/n နဲ့တွက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ n ကတော့ စုစုပေါင်း resteem လုပ်တဲ့သူအရေအတွက်ပါ။
ဒီလုပ်ဆောင်ချက်တွေအကုန်လုံးကို Steemhunt.com ကနေပဲပြုလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
Self-vote ပေးတာကို ထည့်သွင်းရေတွက်မှာမဟုတ်ပါဘူး။
Voting bots တွေနဲ့ subscription service တွေကိုလဲ ထည့်သွင်းရေတွက်မှာမဟုတ်ပါဘူး။
အခြား steemit user တွေကို steemhunt ကို ဖိတ်ခေါ်တဲ့သူတွေကို တစ်နေ့ကို token 90000 ခွဲဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
Steemhunt ကိုအသုံးပြုတဲ့သူတွေအနေနဲ့ ကိုယ်ပိုင် referral link တစ်ခုကို ဖန်တီးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ကယ်လို့ steemit user တစ်ယောက်ယောက်က referral link ကိုသုံးပြီး steemhunt ကို join ခဲ့မယ်ဆိုရင် နှစ်ယောက်စလုံး token ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
ပေးမဲ့ အချိုးအစားကတော့ 1/n ဖြစ်ပြီးအများဆုံး ၅၀၀၀ အထိပဲလက်ခံသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
Referral interface က ready ဖြစ်တာနဲ့ ဒီ airdrop ကို စတင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အခုတော့ ready မဖြစ်သေးဘူးထင်ပါတယ်။
ဒီအပိုင်းအတွက်ကို တစ်နေ့ကို 60000 token ခွဲဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Steemhunt ဆီကနေ upvote ရတဲ့သူတိုင်း ဒီ token ကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
Steemhunt ကနေ အပိုင်းသုံးပိုင်းခွဲပြီး upvote ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒါတွေကတော့ approve posts, review comment နဲ့ moderator comments တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ ညတိုင်း သန်းခေါင်ကျော်တာနဲ့ စဗုတ်မှာဖြစ်ပါတယ်။
Steemhunt ရဲ့ voting powerကို ပိုစ့်အတွက် ၈၀% comment အတွက် ၁၀% နဲ့ moderator comment အတွက် ၁၀% ခွဲခြားထားပါတယ်။ အဲ့ဒိတော့ 48000. 6000,6000 ဆိုပြီး အပိုင်းလိုက်ခွဲထားပါတယ်။
HUNT token ဘယ်လောက်ရမလဲဆိုတာကတော့ Steemhunt ရဲ့ voting ရတဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်။ တစ်ကယ်လို့သင့်ရဲ့ပိုစ့်က ၂၀% voting power ရတယ်ဆိုရင် ၈၈၀ token လောက်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
Steemhunt အနေနဲ့ KST အချိန်ဇယားအရ သန်းခေါင်ယံကျော်တာနဲ့ ဗုတ်စပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီ airdrop ကိုတော့ ရှေ့က airdrop တွေ စပြီးတဲ့ အချိန်မှာစတင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
အပိုင်းတွေအများကြီးမှာ တစ်ပြိုင်နက်ထဲ ပါဝင်လို့ရပါတယ်။ ဉပမာ Steemhunt ကို SP delegate လုပ်မယ်ဆိုရင် SP holder အနေနဲ့ရော Sponsor အနေနဲ့ရော ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ကယ်လို့ အကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့် SMT မလုပ်ဖြစ်ခဲ့ဘူးဆိုရင် HUNT token တွေကို အခြား platform တွေမှာလဲလှယ်လို့ရပါတယ်။